Fantaro i ‘Droncita,’ Meksikana Artista Voalohany Mpanao Graffiti Amin’ny Drone · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Oktobra 2015 3:39 GMT
Vakio amin'ny teny English, Türkçe, বাংলা, Italiano, Français, Español
Ny Oktobra 2014, noraisin'ny tetikasa iombonana Rexiste, malaza tamin'ny nanoratany ny “Ny fanjakana no nanao io” tao amin'ny Kianja Zocalo ao an-tanànan'i Meksiko, ho mpikambana iray vaovao ao anatin'ny fianakaviambeny tsy mitonona anarana i Droncita, ilay drone manidina.
Ho fankalazàna ny tsingerintaona voalohan'ilay fakàna an-keriny faobe tao Iguala, ny fanaovana graffiti ny sarin'ny filoha Meksikàna Enrique Peña Nieto no asa voalohany nataon'i Droncita, itakiana ny fametrahany fialàna. “Fotoana izao hanovàna ny zavatra rehetra,” hoy ny eo amin'ilay graffiti.
Mbola tsy hita foana ireo 43 mpiofana ho mpampianatra tao Ayotzinapa, izay nanjavona ny 26 Septambra 2014, taorian'ny nanafihan'ny polisy tao an-toerana azy ireo. Nofintinin'ireo manampahefana tamin'ny hoe ireo fikambanana mpikirakira zavamahadomelina no namono ireo tanora sy nandoro ny fatiny, saingy tsy mino izany filazana ofisialy izany ny fianakavian'ireo niharan-doza.
Nanokatra ny saina ho amin'ireo herisetra sy kolikoly manjaka ao Meksika ny raharaha Ayotzinapa — ary ny tsy fahavitàn'i Peña Nieto mitsabo ity olana mahafaty ity.
Jereo ery ambony ny lahatsary misy fandikàna amin'ny teny Anglisy.